Wakiilka Gareth Bale Oo Si Carro Leh Uga Jawaab Celiyay Hadalkii Uu Tababare Zidane Ka Yiri Mustaqbalka Bale - Gool24.Net
Wakiilka Gareth Bale ninka lagu magacaabo Jonathan Barnett ayaa tilmaamay inay tababare Zinedine Zidane sharafdhac ku aheyd hadaladii uu ka yiri mustaqbalka xiddiga reer Wales.
Tababaraha Real Madrid Zidane ayaa Bale ka saaray kooxdii kulan saaxiibtinimo xalay la ciyaaray Bayern Munich, waxaana uu ka dib ciyaartaas saxaafada u sheegay inuu rajeynayo inuu xiddigii hore ee Tottenham dhawaan ka tago kooxda.
“Bale waa laga saaray kooxda sababtoo ah Madrid waxa ay isku dayaysaa inay iibiso” ayuu Zidane u sheegay warbaahinta ka dib guuldaradii 3-1 ee ka soo gaartay Bayern Munich.
“Haddii uu bixi karo berri, waa ay fiicnaan laheyd.
“Waxaan rajeyneynaa inuu dhawaan baxo. Qof walba ayay u fiicnaan laheyd. Waxaan ka shaqeyneynaa inuu u wareego koox cusub.”
Bale oo Real Madrid ku biiray sannadii 2013 ayaa weli qandaraas kula jira kooxda iyadoo qandaraaskiisa uu dhacaya sannada 2022, waxaana wakiilkiisa Barnett uu hore u sheegay inuusan degdeg ugu jirin inuu ka tago Madrid.
Isagoo si toos ah uga jawaabayay hadaladii Zidane, wakiilka Bale ayaa u sheegay ESPN FC : “Zidane sharafdhac ayay ku hadalay inuu sidaas uga hadlo shaqsi wax badan u soo qabtay Real Madrid.
“Haddii iyo marka uu Gareth Bale baxayo waxaa sabab u noqonaya danta Gareth ee kuma imaaneyso ceyrinta Zidane.”
Xiddiga reer Wales ayaa lala xiriiriyay kooxdii ay xalay la ciyaareen ee Bayern Munich iyo kooxo kale, iyadoo xiddiga khadka dhexe ee Jarmalka Thiago Alcantara uu sheegay in weeraryahanka lagu soo dhaweyn doono Bavaria.
“Aniga ahaan waxay i la tahay wax sahlan, ciyaaryahan kasta oo weyn oo doonaya inuu yimaado una ciyaaro koox weyn sida Bayern Munich waa ay ku soo dhawaan karaan halkaan” ayuu Alcantara u sheegay warbaahinta ka dib kulankii xalay.
“Albaabka ayaan ku fureynaa.
“(Arjen) Robben, (Franck) Ribery iyo Bale boosas isku mid ah ayay ka ciyaaraan, waxaa naga tagay Robben iyo Ribery oo ah labo xubnood oo taariikh ku leh kooxdaan.
“Haddii Gareth uu imaanaya ama ciyaaryahan weyn kasta oo doonaya inuu halkaan imaado waxaan leeyahay soo dhawoow.”